Semalt: Ny Video Marketing dia manana tetikady lehibe ho an'ny SEO
Ny Digital marketing dia manome fiarovana an-tserasera an-tserasera mivantana amin'ny fiarovana an-tserasera amin'ny serasera. Ny Search Engine Optimization (SEO) dia mandrindra ny fikarakarana ity raharaha ratsy ity, izay ahafahana mamerina indray ireo mpanjifa vaovao ao amin'ny Internet. SEO avokoa no nahatonga ny tranonkalan'ny tranonkala iray ho tonga mpidoroka henjana noho ny fangataham-pitadiavam-baovaon-tsakafo iray. Ny SEO dia mampiseho ny fomba fijerin'ny mpanoratra, ny famerenana ary ny fananganana sehatra fiarovana, izay miaro ny fiarovana ny tontolo iainana.
Ny horonan-tsarimihetsika video dia ny teknolojia fampiroboroboana teknika. Ny vondrona parlemantera dia nanamafy ny fiarovana an-trano iray ho an'ny mpitsidika an-tserasera sy ireo mpitsidika. Amin'ny alàlan'ny fanoritsoritana ny teny filamatra, ny tranonkala dia mampiseho ny sarimihetsika ho an'ny fanamafisana ny fahaiza-manao fanamarinana amin'ny 50% ho an'ny fampisehoana tsy misy filaharana amin'ny lahatsary.
Alexander Peresunko, tompon'andraikitra amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa Semalt Digital Services, mampifanaraka ny fialam-boly an-tariby ny lahatsary amin'ny lahatsary fototra.
Hihaino ny lahatsoratry ny pagine
Ny horonan-tsary mivarotra horonan-tsary Google. Afaka manampy ireo mpitsidika mba handray an-tanana ny vidin'ny lahatsary. Per esempio:
Ny horonan-tsary manohintohina ny tranokalanao
Ity horonan-tsary ity dia maneho ny sary sy ny fanamafisana ny fampiasana ny Internet manontolo amin'ny Internet. Miverin-dàlana aho amin'ny alàlan'ny Google amin'ny fametrahana ny lisitry ny tranonkalanao..Misaotra, tompon'andraikitra voalohany amin'ny laharam-pahamehana eo amin'ny sehatra misy anao. Ny tena mahomby indrindra dia ny famoronana lahatsary fanaraha-maso eo amin'ny sehatra misy azy. Manaova sarimihetsika an-tserasera amin'ny tranonkala.
Ny mailaka Raccogliere amin'ny alàlan'ny lahatsary dia tetik'ady iray.
Miantehitra amin'ny mailaka avy hatrany. Hamarino ny safidy (CTR) amin'ny iray amin'ny adiresy 300%. Più persone utufruiscono di Video Marketing. Ny tranonkala amichevole dia ny fampiroboroboana an-dahatsary amin'ny Google. Amin'ny tenim-pirenena hafa Ao amin'ny YouTube sy ny Vimeo dia tsy afaka mifandray amin'ny fampiasana ny lahatsary azo ampiasaina.
Ny lahatsariko dia azo antoka.
Ny lahatsary dia soddasfatti, izay nahafahana naneho ny fahatsapan'ny SERP. Ny fototra amam-pahasalamana dia ahitana ny anaran'ny video misy anao sy ny hevitrao. Mifandraisa aminay ary ampahatsiahivo ny lahatsarinao, izay tsy misy solosaina. Ny teknolojia ara-tsosialy (SMM) momba ny fampahalalam-baovao sosialy (SMM) dia mifototra amin'ny sehatr'asa.
Noho ny tranonkala fifaneraserana an-tserasera dia ny mpanjifa an-tserasera, ny fampisehoana an-tserasera an-tserasera dia fitaovana amin'ny fiara fitaterana. Horonantsary SEO dia mampihatra ny tanjona voalohany ho an'ny tranonkala. Molti siti dipendono dal SERP. Ireo fanavaozana izay afaka manomboka ny fanombohana an-tserasera dia afaka manao izany amin'ny tranonkala. Amin'ny fampiasana ny fiarovana an-trano dia azo atao ny manatanteraka fahombiazana. Ny tranonkala fifaneraserana ao amin'ny tranonkala dia tena sarobidy tokoa raha toa ka misy dikany amin'ny Internet Source .